Filoha RAVALOMANANA : ATAOVY IZAY HANDANIANA AN’I DR ROBINSON – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana. Nambarany tamin’izany fa
fisaorana lehibe ho an’ny vahoaka malagasy no nataon’ireo filoha Afrikana maro fa tsy namela ny mpanongam-panjakana tamin’ny fifidianana ny vahoaka. Mbola ireo mpanongam-panjakana ireo ihany ve sa hanohana an’i Robinson, fanontaniana lehibe andraisana andraikitra amin’ny 20 desambra izany hoy izy. Telo herinandro misy fotoana lehibe eritreretan’ny vahoaka malagasy. Nanaiky ny dokotera Robinson hoy izy tamin’ny fihodinana voalohany ary amin’ny fihodinanana faharoa. Ekena fa misy fizarana volabe nataon’ny kandida mpifaninana taminy, marina fa tsy voavidy vola fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy no tokony ataon’ny malagasy. Mila mpitondra mendrika sy tsara isika ho fampihavanana izay no ilain’ny firenena. Vonona amin’izany isika hoy izy ary andraikitro ny milaza aminareo fa ny dokotera Robinson nandresy tamin’ny fihodinana voalohany ka hifidy azy isika amin’ny fihodinana faharoa. Telo herinandro hoy ny filoha Ravalomanana hanaovana ezaka lehibe, mila antsika miara miasa, noho izany dia miantso antsika rehetra, marina fa nisy ny hevitra tsy mitovy. Mibaiko anareo dada fa tsy maintsy miray hina isika, avelao ny hambom-po. Ataovy izay handaniana ny dokotera Robinson. Andraikitro ny milaza amianreo amin’ity herinandro ity. Matokia ahy ianareo fa efa maro ireo firenen-dehibe efa fa vonona hiarahiasa. Mila governemanta matanjaka ny dokotera Robinson hoy izy iaraha hiasa aminy, izay no nahatonga ny movansy Ravalomanana sy ny avana miara manohana ny lisitry ny kandida solombavambahoaka. Mila mailo isika fa misy ireo misandoka anarana, hamarino tsara ny kandida tokony ho fidiana. Toko telo mahamasanahandro hoy izy ireo ka ataontsika ho filoha Robinson, depiote miasa miaraka aminy, ary i Neny Praiminisitra. Matoky ny fahendren’ny vahoaka malagasy aho ary mihaino tsara ahy ianareo.
Misaotra hoy izy fa tena matoky ianareo, hitanareo ny voka-pifidianana fa misy ny mamoafady. Minoa fotsiny ihany. Fantatro ary hitan’izao tontolo izao fa novaina ireo tomponandraikitra isaky ny faritra, novaina ny lalàna ao amin’ny tondrozotra amin’nyalalan’ny didmpanjakana, tsy izany hoy izy no atao hampiraviravi-tànana, mila mahery isika, tsy maintsy mandresy isika, minoa fotsiny ihany. Mino aho hoy izy fa isika tsy nivadika n’inon’inona zavatra ataon’ireo olombitsy dia Andriamanitra mahery, minoa ahy ianareo,tsy maintsy mijoro isika ary tsy maintsy miteny.
Auteur Solo Razafy*Publié le 29 novembre 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “Filoha RAVALOMANANA : ATAOVY IZAY HANDANIANA AN’I DR ROBINSON”
29 novembre 2013 à 18 h 25 min
Mankasitraka Atoa filoha tsy ho ela intsony ny fandresena ary ho mazava sy mangarahara izany tsy misy mpanohana intsony ilay mpanogam-panjakana fa na dia ireo mpiara dia @ny aza dia niala avokoa .
Mba mampatsiahy ireo tompon’andraikitra ihany mba hanaraka mazava ny baikon’ny filoha Ravalomanana ary handray ny rehetra izay manantona ka tsy hanilika an’iza na iza baiko avy @ ny filoha izany ka mba tanteraho ary tsy ho vita mora ny fandresena fa hilaina ny firaisankinan’ny malagasy rehetra.
Mitaky ary mba tianay ho hita ato, ny kabarin-dry Manoela ary tatitry ny hetsika GTT ê !
Ny GTT dia miasa mafy rean’ny faritra amin’izao fotoana, ary fantatr’Ingahy Robinson ary indrindra ny Filoha Ravalomanana tsara izany !
Cette double majorité prouve que les malgachent qui votent compris l’imprtance de leurs votes pour la suite du processus du cangement qu’ils éxigent :
..changement de politique générale respectant l’état de droit (respect de ladémocratie , des libetés fondametales ;des mois ,des traités internationaux,la liberté et l’indépendance de la Ustice Souverauine exercée et rendue au nom du Peuple Malgaches Souverain00)..
,,changement de politique économique: une vision et une durection politique dufférente de celle prônée et non réalisée lors du coup d’état..poursuite du MAP avec formation approfondie et ccélérée des junes de 16 à 30 ans (dans la mécanique générale n dans l’information ( conception , répartion , applctions )-formation des infiers et des infirmiers )- des assistants techniques agricoles (pour tiutes les cultires vivrières , des arbres fruitiers…) pour favoriser la productivité..entretiens des barrages pour la production d’électricité et pour régulation des canaux d’irrigation des terres agricoles
Ces mises à jour et moses à niveau concernent aussi et surout le corps ensegnant sans exclusive !
Ma grande raison qui justifie et qui motive les efforts à déployer au deuxième tour et aux élections des députés dans les distrcts conerne notre crédibilité , notre fiabilité vis à vis des investisseurs , des bailleurs de fonds ,des Pays qui veulent Nous aider3
Ces « prêteurs « n’ont sr MADAGASCAR aucune référence sauf les indications des activités du Pays entre 2002 et fin 2008..
Faits les » bons choix » lors de ces deux élections dont les résutats favorables au Président ROBINSON JEAN LOUIS vont faciliter le dur travail ui ttend le Premier Ministre NENY RAVALOMANANA LALAO et son gouvernement…
absolument d’accord :
l’EDUCATION , la formation est un levier essentiel , le premier « investissement » à faire pour sortir du désastre économique actuel…
La force d’un peuple est d’être éduquée …d’abord.
Les investisseurs ne vont pas gâcher leur finance dans un pays qui n’a pas de « têtes formées »……….
Les bras cassés sont facilement remplacés par la robotisation…
Précédent Article précédent : ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : HANITRA MANINTONA NY VAHOAKA RERAKY NY ADIM-PIAINANA